Valin-tenin’ny filoha Rajoelina tao amin’ny France 24: « Manana ny fiandrianany i Madagaskara… » | NewsMada
Par Taratra sur 12/05/2020
Niaro mafy ny tambavy CVO sy nametraka ho ambony ny hambompom-pirenena ny filoha Rajoelina Andry tamin’ny resaka nifanaovany tamin’ny mpanao gazety eo anivon’ny France 24 sy ny RFI, omaly. Hentitra ny tenany manoloana ny tandrefana ary tsy hihemotra intsony.
Efa nifoha i Afrika sy i Madagasikara, manomboka eto. « Manana ny fiandrianany i Madagasikara… Ao anatin ny ady atrehina, misy ny te hanakana anay, misy ny te hampiraviravy tanana anay. Misy mihitsy ny mandrara anay tsy handroso. Tsy hisy anefa firenena na fikambanana iraisam-pirenena afaka hanakana anay tsy handroso izany. Firenena manana ny fiandrinanay izahay ary hamonjy sy hanampy ny vahoakanay mba tsy ho fatin’ny Coronavirus », hoy ny filoha. Nohitsiny fa misy mametraka olana amin’ny tambavy CVO noho izy avy aty Afrika, ary misy ireo tsy manaiky raha firenena mahantra hoatra an’i Madagasikara, firenena faha-63 amin’ireo mahantra indrindra eto ambonin’ny tany, no mahita ity vokatra ity hamonjena izao tontolo izao.
Sitrana tamin’ny tambavy CVO
Nanterin’ny filoha fa efa azo raisina ho porofon’ny fahombiazan’io tambavy io ireo olona sitrana sy ny tsy mbola fisian’ny maty. Notsiahiviny fa ahitana 171 ny olona voa ka ny 105 amin’ireo, efa sitrana ary notsaboina tamin’ny tambavy.
Nambaran’ny filoha fa misy ireo fanafody vokarina amin’ny laboratoara lehibe. Manasitrana ny maro amin’ireny nefa mahafaty ihany koa. « Tsy manao fanambarana ka mandrara ny fihinanana ireny fanafody ireny anefa ny OMS. Mampiasa tambavy, fitsaboana nentin-drazanay izahay ary fantatra tsara ny asany. Raha ohatra tsy i Madagasikara fa firenena Eoropeanina no nahitana io fanafody io, nametraka ahiahy tahaka izao ve ry zareo ireo ? Tsy mino izany aho. Tsy hisy hahasakana anay izany intsony », hoy ny filoha. Notsindriny fa tsy ny fomba nikirakakirana na ny fanandramana ara-klinika no olana ho an’ny sasany. Fa ilay tambavy manasitrana ary tsy misy ratsy hoentiny amin izao fotoana izao, araka ny valin-teniny.
Mbola tsiambaratelo ny ravinkazo hafa
Notsiahiviny fa tsy ny artemesia ihany ny zavamaniry nanamboarana azy io fa misy zavamaniry roa hafa. « Tsy mbola fotoana hitenenana ireo ravin-kazo roa hafa ireo izao fa zava-dehibe ny hoe mahasitrana ity tambavy ity », hoy ihany izy.
Araka izany, roso toy tsa mipody koa. Na izany aza, mila mailo amin’ny mety ho kendry tohina. Mitaky fitiavan-tanindrazana sy fahatongavan-tsaina ho an’ny rehetra koa anefa izany.
Tena efa mijery antsika izao tontolo izao, manoloana ity tambavy CVO ity…
Momba ireo Nosy manodidina, nambaran’ny filoha Rajoelina Andry fa tokony ho nisy ny fivorian’ny vaomiera iraisan’i Frantsa sy i Madagasikara, hanohizana ny dinika teo aloha. Tsy mihemotra amin’ny fitakiana amin’ny maha fiandrianan’i Madagasikara ireo Nosy ireo ny filoha, araka ny nambarany teo am-pamaranana.